Dalka oo maanta ka baxaya firaaqa hay’adaha dastuuriga | KEYDMEDIA ENGLISH
Dalka oo maanta ka baxaya firaaqa hay’adaha dastuuriga
Xildhibaannada maanta dhaaranaya ayaa ku dhawaan doona 300, taasoo ka dhigan in dalku u dareeri karo doorashada Guuddonka Golayasha iyo Madaxweynaha, maadaama si buuxda dhidibada loogu taagay hay’adda ugu sarreysa dalka ee sharci dajinta iyo ka xisaabtanka.
MUQDISHO, Soomaaliya – In ka badan hal sano oo dib u dhac, daah doorasho iyo firaaq siyaasi ah jireen, ugu danbeyn dalka ayaa maanta yeellan doona Baarlamaan rasmi ah, marka la dhaariyo xubnaha dhameystiray ku biiritaankooda Baarlamaanka 11-aad ee JFS.
Xafladda dhaarinta Xildhibaannada ayaa ka dhaceysa Teendhafa Afisyooni ee garoonka diyaaradaha, waxayna si rasmi ah u billaaban doontaa marka ay Muqdisho soo gaaraan Xildhibaannada ka soo safraya Baydhabo, isla-markaana qaataan shahaadada FEIT.
Ammaanka guud ahaan goobta xafladdu ka dhaceyso ayaa aad loo adkeeyay, waxaana xitaa Xildibaannada lagu wargaliyay in ay gawaaridooda uga tagaan akadamiyada tababarka Ciidanka Booliska ee Generaal Kaahiye, basasna lagu geyn doono teendhada.
Hayeeshee, dad ku sugn garoonka diyaaradaha ayaa KON, u sheegay in ay maqlayaan dhwaqa madaafiic xooggan, oo la rumeysan yahay in ay ku dhaceen xaafado u dhow xeyndaabka garoonka, halka warar kale sheegayaan in dhawaqu yahay hub laga ridayo Tukisom.
Xafladda dhaarinta, waxaana ka qeyb gali doona, Ra’iisul Wasaare Rooble, Wakiillada Beesha Caalamka, Midowga Musharixiinta, Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka, Ururrda Bulshada Rayidka iyo marti kale, oo kor joogto ka noqonaya dhaarinta.
Inta badan xildhibaannada hay’adda NISA, ka soo galay Baarlamaanka ayaan maanta dhaaran doonin, waxay qol ugu xiran yihiin Fahad Yaasiin, oo u boobay kuraasta, halka xubno ay ku jirto Khadiijo Diiriye, la gadoodsan yihiin Kutladda NISA.
Si kastaba, waddanku wuxuu maanta ka baxayaa firaaqii dastuuriga ahaa, wuxuuna yeelanayaa Baarlamaan rasmi ah, taasoo meesha ka saari doonta, fowdadii siyaasadeed ee Farmaajo dalka ku waday muddadii firaaqu jiray iyo fidnadii Maxamed Mursal.
Sida dastuurku qabo, marka uu dhamaado waqtiga hay’adaha Dowladda, waxaa si xil-gaarsiin ah, howlaha lama huraanka ah u daboolaya Xukuumadda, hayeeshee, hadda shaqada doorashooyinka Guddoonnada iyo Madaxweynaha ayaa ku wareegi doonta Baarlamaanka.